काठमाडौँ, नेपाली काँग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले संशोधित विधानका सम्बन्धमा सातै प्रदेशमा राय तथा सुझाव लिने भएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै काँग्रेसले पनि त्यसअनुरुप विधान परिमार्जन गर्न सातै प्रदेशबाट राय तथा सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको हो ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज ०५, २०७५१३:३१
“सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आतुर छु “
ओली सरकारले लगायो नयाँ मन्त्रिहरुको टुङ्गो ! यी दुई बन्ने भए मन्त्रि !
आज रत्नपार्कमा कांगेसले २ बजे सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने ! देशैभर पनि प्रदर्शन रहने !